नेपाली कां‌ग्रेसको क्रोध « Harekpal
हरेकपल October 14, 2019
नेपाली काग्रेस समय र परिस्थितिअनुसार आवश्यक समयमा आफ्नो क्रोध प्रकट गर्छ । कांग्रेसको क्रोधमा नै नेपालको राजनीति एवं व्यवस्था परिवर्तन भएका छन् । नेपाली कांग्रेसकै क्रोधमा १०४ वर्षे राणा शासन गयो, नेपाली कांग्रेसकै क्रोधमा पञ्चायती व्यवस्था गयो र नेपाली काग्रेसकै क्रोधमा राजशाही गयो र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो ।
नेपाली कांग्रेसमा बिपी कोइराला एक भैरवजस्ता थिए । तिनको क्रोधको अगाडि व्यक्ति त के व्यवस्था पनि भयभीत हुन्थ्यो । तिनै बिपी कोइरालबाट दीक्षित शिष्य नेपाली कांग्रेसमा थुप्रै छन । ती सबै शिष्यहरुमा बिपीको शक्ति र भैरव रुप प्रवेश भएको छ । अहिले नेपाली काग्रेसमा यस्ता भैरवहरु थुप्रै छन् । तिनीहरुको क्रोध प्रकट हुन मात्र बाँकी छ, कथंकदाचित त्यो क्रोध प्रकट भयो भने बुझ्नुस् हनुमानको क्रोधमा लंका तहसनहस, रामको क्रोधमा रावण सकियो , नृसिंहको क्रोधमा हिरण्यकस्यपु सकियो, कृष्णको क्रोधमा कंश सकिएजस्तै सकिन्छन् ।
त्यस्तै अर्का भैरवस्वरुप गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए, तिनको क्रोधमा त नेपालको राजनीतिक प्रणाली आमूल परिवर्तन भयो र यिनकै क्रोधमा राजशाही पनि गयो । यस्तो इतिहास बोकेको नेपाली कांग्रेसलाई नेकपा दुईतिहाइ सरकारले जिस्काउँदै छ । नेपाली कांग्रेसलाइ बिच्काउँदै छ ।
लोकतन्त्रलाई संकुचनमा ल्याउन खोज्नु, प्रेस तथा वाक स्वतन्त्रता कठोर बनाउँदै जानु नै नेपाली कांग्रेसलाई बिच्काउनु हो । नेपाली काग्रेसलाइ चिढ्याउनु छ भने क्रोधित बनाउनु छ भने केही गर्नुपर्दैन, मात्रै लोकतन्त्र दमन गरे पुग्छ । कानुनी राज्यलाई तहस–नहस गरे पुग्छ । लोकतन्त्र र नेपाली कांग्रेसको अन्तरंग सम्बन्ध छ ।
लोकतन्त्रकै लागि नेपाली कांग्रेसको जन्म भएको हो र यो लोकतन्त्र नेपाली काग्रेसमै सहज अनुभूति गर्छ । नेपाली कांग्रेसमै यो लोकतन्त्र रमाउँछ । स्वतस्फुर्त भएर यस्को जीवन पल्लवित हुन्छ । नेपाली कांग्रेसमै लोकतन्त्रको जीवन हृष्टपुष्ट हुन्छ । लोकतन्त्रको रगत बन्दै , हाडमासी बन्दै गिदी बनेर स्वस्थ लोकतन्त्र देख्न पाउँछौँ ।
हो यही लोकतन्त्रको विपक्षमा प्रस्तुत हुँदा, यसको दमन हुँदा नेपाली कांग्रेसमा क्रोध आउनु स्वाभाविक र प्राकृतिक हो । यो कुरा नेकपाले बुझेको छ कि छैन बुझेको छैन भने बुझोस् कि यसरी नेपाली काग्रेसको क्रोध प्राकट्य गर्न चाहेको हो भने पुनः क्रोध जन्माउन खोजेको हो भने अब नेपाली कांग्रेस अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्थामा आफ्नो क्रोध प्रकट गर्दैन ।
नेपाली काग्रेस संविधानविरुध्द क्रोध प्रकट गर्दैन, नेपाली काग्रेसको क्रोध अब सरकारविरुध्द, सरकारको अधिनायकविरुध्द, सर्वसत्तावादविरुध्द सरकारको चरित्र र आचरणविरुध्द सरकारबाट पोषित भइरहेको भ्रष्टचार र बलात्कार एवं हत्याविरुध्द हुनेछ । त्यतिखेर त्यो क्रोधको समना गर्ने ताकत कसैसँग हुने छैन । त्यतिखेर क्रोधले आफ्नो लक्ष्य भेदन नगरी शान्त हुने छैन । त्यो क्रोधमा को–को खरानी हुन्छन् थाहा छैन ।
अहिले नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको र यसको अभ्यास र यसलाई क्रियाशील गराउने अवस्थामा रहेको स्थितिमा वर्तमान नेकपाको दुईतिहाई सरकारबाट मित्र राष्ट्र चीनको (सि विचारधारा)लाई भित्र्याउने अभ्यासकै प्रयोजनमा स्कुल विभागबाट प्रशिक्षण शिविर गराउनुले नेपाली जनता र अन्य राजनीतिक दल सशंकित छन् । यो प्रकरणबाट पनि नेपाली कांग्रेस क्रोधित भएको छ र नेकपासँग विश्वास हट्दै गएको छ ।
अहिले नेपाली कांग्रेसमा पाटी सभापति शेरबहादुर देउवा नेकपाविरुध्द अत्यन्त क्रोधित देखिएका छन् । यसै क्रमामा डा. मीनेन्द्र रिजाल, डां शेखर कोइराला, डा. डिला संग्रौलालगायत नेताहरुको क्रोध प्रचुर देख्न पाइँदै छ । यी सबै क्रोधहरुलाई नेपाली कांग्रेसले एकत्रित गरोस् । यो कार्य गर्न केन्द्रीय सदस्यलगायत पार्टी सभापतिको बढ़ी जिम्मेवार र गम्भीर रहन आवश्यक देखिएको छ । यस्तो परिस्थिति निर्माण भएमा मात्र कांग्रेसको क्रोधले लक्ष्य भेदन गर्न सक्छ ।